Okinawa i-Praise – 🛵 လျှပ်စစ် Scooter 2020
ကို 2.4 kW (3.2 ကိုမြင်းကောင်ရေ)
အဆိုပါအိုကီနာဝါ i-ချီးမွမ်းလျှပ်စစ် Scooter ကုမ္ပဏီရှေ့ဆောင်တစ်ဦးထံမှလျှပ်စစ် Scooter ဖြစ်ပါတယ် အိုကီနာဝါ အိန္ဒိယကနေ။
အိန္ဒိယ 2018. နောက်တစ်နေ့အကြီးမားဆုံးစျေးကွက်များတွင်ပိုမိုထက် 19 သန်းရောင်းအားနှင့်အတူကမ္ဘာပေါ်မှာဆိုင်ကယ်များအတွက်အကြီးမားဆုံးစျေးကွက်ဖြစ်တယ်, တရုတ်, အိန္ဒိယက 2030 လျှပ်စစ်မှဆိုင်ကယ်များ၏ရောင်းအားကန့်သတ်ရန်စလေိုကွောငျးကြေညာလိုက်ပါတယ် 2018. ခုနှစ်တွင် 17 သန်းဆိုင်ကယ်ရောင်းချခဲ့သည်။ အိုကီနာဝါအိန္ဒိယတွင်လျှပ်စစ်ဆိုင်ကယ်များအတွက်ပထမဦးဆုံးရှေ့ဆောင်တစ်ခုဖြစ်သည်။
i-ချီးမွမ်းအမှတ်တံဆိပ်၏ထိပ်မော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Scooter 75 km / h ၏ထိပ်တန်းမြန်နှုန်းများအတွက် 2,400 ဝပ် (40 nm) လျှပ်စစ်မော်တာရှိပါတယ်။
အဆိုပါ Scooter 180 ကီလိုမီတာအကွာအဝေးနှင့်အတူတစ်ဖြုတ် 45 ဩလီသီယမ်ဘက်ထရီရှိပါတယ်။ ဘက်ထရီ၏တာဝန်ခံအချိန်3နာရီဖြစ်ပါတယ်။ ဘက်ထရီ၏အလေးချိန်9ကီလိုဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ Scooter (အီလက်ထရောနစ်ဘရိတ်စနစ် Assist) EABS နှင့်အတူရှေ့နှင့်နောက် disc ကိုဘရိတ်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါ Scooter တစ်ဦးရှိပါတယ် Kinetic Energy က Recovery ကိုစနစ် (KERS) သို့မဟုတ်ဘရိတ်ကနေစွမ်းအင်ကိုဘက်ထရီပြန်ရသောဘရိတ်ခြင်းဖြင့် Air-ညစ်ညမ်းမှုလျော့နည်းစေတစ်ဦးကိုမကြာခဏလေထုညစ်ညမ်းမှု၏အရင်းအမြစ်သတိမမူသောရုပ်ပျိုဘရိတ်။